November 2014 ~ လူဗိုလ် ဟူသည် ...
Soe Min November 28, 2014 at 9:34pm
ခုရက်ပိုင်းအတွင်း ဆေးသုတေသနမှာ ဝပ်ရှော့တစ်ခုသွားတက်ဖြစ်တဲ့အခါဆရာဝန်ချင်းတူပေမယ့် ကိုယ်နေ့စဉ်ကြုံတွေ့နေရတဲ့ လုပ်ငန်းခွင်နဲ့ သဘာဝချင်း ခြားနားတဲ့သုတေသီဆရာဝန်တို့ရဲ့ အခေါ်အဝေါ် အသုံးအနှုန်း၊ တွေးပုံမြင်ပုံ၊ လုပ်ပုံကိုင်ပုံတို့ကိုတီးမိခေါက်မိ ရှိလာပါတယ်။ ဟိုးအရင်တုန်းကဆိုရင်တော့ သူတို့ကို ငယ်ငယ်ကဖတ်ဖူးတဲ့ ကာတွန်းထဲကတီထွင်ပါရဂူ ဖိုးဆိတ်ဖြူနဲ့ပဲ ခိုင်းနှိုင်းမြင်ယောင်မိတာပါ။
Thet Wai November 28, 2014 at 9:49pm
မနက်စောစော အိပ်ရာနိုးတော့ အပြင်မှာ နေသာနေတယ်။ အိပ်ခန်းထဲကနေ အပြင်ကို ထွက်လာတော့ အလှမွေး ငါးကန်ထဲမှာ ထည့်ရတဲ့ အရွက်စိမ်းစိမ်း အပင်ကလေးတွေကို ညှပ်ရှည်ရှည်တစ်ချောင်းနဲ့ ဟိုရွှေ့ ဒီရွှေ့ လုပ်နေတဲ့ အမျိုးသားကို တွေ့လိုက်တယ်။ သူက ကျွန်မကို တွေ့တွေ့ချင်းမှာ မုန့်ဟင်းခါး စားပြီး လဖက်ရည်သွားသောက်ကြရအောင် လို့ လှမ်းပြောတယ်။
ကျောင်းပြီးစအလုပ်ဝင်တဲ့အချိန် ကြုံခွင့်ရတဲ့ ကျွန်တော့်ဆရာ ဂျပန်ကြီးတစ်ယောက်ရှိတယ်..။ Mr. Onishi တဲ့..။ အဲ့အချိန် သူ့အသက်က ခုနှစ်ဆယ်ကျော်ပြီ..။
ဒါပေမယ့်.. ကျွန်တော်တို့လူငယ်တွေနဲ့ နေ့နေ့ညည အလုပ်ကို ပြိုင်လုပ်နိုင်တယ်..။ အရမ်းလည်း အပင်ပမ်းခံနိုင်တယ်..။
တခါတရံ အလုပ်ထဲကနေ သူနဲ့နေ့လည်စာထွက်စားရင်.. ကျွန်တော်က.. ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ ထမင်းကြော်ပဲ မှာစားတယ်..။
အဲ့တာကို သူက.. မင်း- ထမင်းကြော်မစားနဲ့.. ငါမှာပေးမယ်ဆိုပြီး ထမင်းပေါင်းမှာပေးတယ်..။ သူကိုယ်တိုင်လည်း.. ထမင်းပေါင်းပဲ စားတယ်..။
ဆရာက ထမင်းပေါင်းကြိုက်လို့လား ဆိုတော့.. '' ကြိုက်မကြိုက်ထက်.. အလုပ်မှာ ကုန်ခမ်းသွားတဲ့ အင်နာဂျီ ပြန်ပြည့်ဖို့ဆိုရင်.. ထမင်းကြော်ထက် ထမင်းပေါင်းက ပိုကောင်းတယ်ကွ '' လို့ သူပြန်
ထမင်းပေါင်းထဲမှာ အသီး-အရွက်-အသား-ဥ အကုန်ပါတော့ အာဟာရရှုထောင့်ကကြည့်ရင် စားသင့်တဲ့အစားအသောက်ပဲ..။
admin | November 30, 2014 | Opinion | No Comments
Myanmar Social Media Revolution Idea Sharing….
ရိုးရိုး လေးပြောရ ရင် အာဏာရှင် မင်းသားကြီး များ ဖြစ်တဲ့ ဦးသိန်းစိန်၊ဦးရွှေမန်း၊ ကာချုပ် မင်းအောင်လှိုင် တို့ရဲ့ အကယ်ဒမီ သရုပ်ဆောင် ကွက်များ ကို ဖော်ထုတ် တော့မယ်။ ဒါရိုက်တာ ၊ ထုပ်လုပ်သူ ဦးပိုင် လီမီတက် ရှယ်ယာ အကြီးဆုံးပိုင် အိုမင်း ရင့်ရော် နေသော မကောင်းဆိုးဝါး သူဌေးကြီး အာဏာရှင်ကြီး သန်းရွှေ ရဲ့ နောက်ဆုံး ပညာ ဖြစ်တဲ့ မင်းသားကြီး ၃ယောက် ရဲ့ (၂)ကိုယ်ခွဲ သရုပ်ဆောင် ပညာ ဖြင့် အရှက်မဲ့စွာ ၂၀၁၅ရွေးကောက်ပွဲ အကယ်ဒမီ ဆု ကို လက်လှမ်း လိုက်ပါပြီ။။။.
ယခု ရွှေပွဲ လာ ရွှေမြန်မာ ပရိတ်သတ် များ မြင်ရတဲ့ အတိုင်း ၊ ဒါရိုက်တာ သန်းရွှေ ရဲ့ ရိုက်ချက် ပြင်းထန်ချက် ကတော့ မင်းသားကြီး ၃ယောက် ကနေ တစ်ဆင့် သရုပ်ဆောင် စကား၊ ဟန်၊အမူအရာ တွေ ပီပြင်စွာဖြင့် ဆရာ သင်ပေးထားတဲ့ အတိုင်း ၊ မဟုတ်တရုတ် အားကိုး ၊ မဟုတ်မမှန် အရူး ကွက်များ ဖြင့် “ငါ သေမှ ရမယ်” ဇတ်ကွက် ကြီးကို ဘီလူးဆိုင်း ဖြင့် က ပြ ဖျော်ဖြေ သွားခဲ့တာ၊အားလုံး ရင်သပ် ဝမ်းနည်း ပက်လက် ဟစိ ဟစိ နှလုံး (HEART) ထိ ခဲ့ကြပါပြီ။ စိတ်မကောင်း စွာနဲ့ ပဲ ကျွန်ုပ်တို့ ရွှေမြန်မာ တွေ ၂၀၁၅ရွေးကောက်ပွဲ အကယ်ဒမီ ဆုကို မဲပေးဆုံးဖြတ် ရတော့ မှာပါ။
ဘောလိဝုဒ်မင်းသမီး ဗီနာမာလစ် ထောင်ဒဏ် ၂၆ နှစ်ချမှတ်ခံရ ဘာသာတရားကို မလေးမစား လုပ်မှုဖြင့် အရေးယူခြင်းဖြစ်
အပန်းဖြေစရာ တစ်နေရာလောက် ရှာပေးပါ...
ပခုက္ကူ မြို့မှာ ပေါက်ကွဲစေနုိုင်တဲ့ ပစ္စည်းတချို့ တွေ့ရှိ (ရုပ်/သံ)
Father Land ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင် အာမခံမရ အချုပ်ဖြင့် တရားရင်ဆိုင်ရမည်ဟုဆို
နိုင်ငံဝန်ထမ်း လစာတိုးရန် စဉ်းစားနေဆဲဟု ဘဏ္ဍာရေးဝန်ကြီးပြောကြား
ဓါးဦးချွန် နဲ့ လိုင်စင်မဲ့ယာဉ် ဖမ်းမိ
လမ်းဘေးတွင်ရပ်နေသူအမျိုးသား ဆိုင်ကယ်တိုက်ခံရသဖြင့် သေဆုံး
မိုဘိုင်းဖုန်းဘက်ထရီကို စက္ကန့်ပိုင်းအတွင်း အားသွင်းနိုင်မည့် နည်းပညာ တီထွင်
ကတိအကျိုးအပျက်တွေနဲ့ ပြည်သူ့မျှော်လင့်ချက် ရိုက်ချိုးခဲ့တဲ့ သမ္မတလောင်းကြီးကို ဘယ်သူမဲပေးမှာလဲ – လင်းထိုက် (Y.I.T)
ဦးသိန်းစိန်အား သမ္မတဖြစ်လာစေသော အကြောင်းရင်းမှာ အကြီးအကဲများ အပေါ် ကလန်ကဆန် မလုပ်ခဲ့ ခြင်းကြောင့်ဟု မိသားစုဝင်ပြော
မိအိုဖအို မျက်မမြင်မိဘနှစ်ပါးကို အလုပ်အကျွေးပြု နေတဲ့ ကျွန်တော့်ယာဉ်မောင်းက taxi မောင်းချင်တယ်ဆိုလို့.. ရှိစုမဲ့စုလေးထဲက ဖဲ့ရွဲ့ ပြီး .. သူ့စိတ်ကြိုက် ကားလေးတစ်စီး
အုံနာကြေးတစ်ရက်တစ်သောင်း ပေးမယ်ဆိုပေမင့်.. မင်းအဆင်ပြေမှ ပေးပါလို့ပဲ ပြောထား
ပါတယ်..။ သူ့ခမျာ့လည်း.. အဆင်ကသိပ်ပြေချင်ဟန်မရှိပါ..။
U Ti Law Ka
ရဟန္တာထေရီမကြီးနှစ်ပါး ထိုင်နေတဲ့အချိန်မှာ တစ်ပါးကမေးတယ်။ အသက်ကလည်းငယ်တယ် အရွယ်လည်းရှိပါရဲ့နဲ့ ဘာကြောင့်အိမ်ထောင်မပြုတာလည်းဆိုတော့ တစ်ပါးက သူ့ဇာတ်ကြောင်းကို ပြောပြတယ်။ သူဟာဘဝတစ်ခုမှာ ကုန်သည်တစ်ယောက်နဲ့ လက်ထပ်ခဲ့တယ် ။ပေါင်းသင်းပြီးမကြာခင်မှာပဲ ယောကျာင်္းကကုန်ကူးသွားတော့ သူ့မှာကိုယ်ဝန်နဲ့ ကျန်ခဲ့တယ်။
ရေနွေးပူ၊ မီးပူ၊ ဆီပူများလောင်လျှင် ကြက်ဥတစ်လုံးကို ဖောက်၍ ကြက်ဥအကာဖြင့် အပူလောင်သည့်ဒဏ်ရာပေါ်ကို သုတ်လိမ်းပေးပါက ချက်ချင်းသက်သာစေပြီး အမာရွတ်၊ ဒဏ်ရာ၊ အရေကြည်ဖုများ လုံးဝမပေါ်ပဲ ပျောက်ကင်းစေပါသည်။
ဝန်ထမ်းများလစာတိုးလျှင် ကုန်ဈေးနှုန်းထိန်းချုပ်နိုင်ရေး ဘယ်လိုပြင်ဆင်ကြမလဲ
Author: lubo601 | 10:36 PM | No မှတ်ချက် |
၂ဝ၁၅-၂ဝ၁၆ဘဏ္ဍာနှစ်မှစတင်၍ အစိုးရဝန်ထမ်းများ၏ မူရင်းခံစားနေရသော
လစာများ ထပ်မံတိုးမြှင့် ခံစားခွင့်ရရှိ တော့မည်ဖြစ်သည်။ အကြောင်းမှာ နိုင်ငံ့ဝန် ထမ်းများအား ခေတ်နှင့်အညီ ထိုက်တန်သော လစာတိုးမြှင့်ပေးရန် ပြည်ထောင်စုအစိုးရအား တိုက်တွန်းကြောင်း အရေးကြီးအဆိုတစ်ရပ်ကို နိုဝင်ဘာ ၁၂ရက်ကကျင်းပသည့် ပြည်ထောင် စုလွှတ်တော်အစည်းအဝေး၌ ပြည်သူ့လွှတ်တော် ကိုယ်စားလှယ် ဦးဇော်မြင့်ဖေက တင်သွင်းခဲ့ ပြီး
အိန္ဒိယ မိန်းကလေးငယ် ၂ဦး အသတ်ခံရတာ မဟုတ်ဟု ဆို
တုတ်၊ဓါး၊လက်နက် ယူဆောင်သွားလာမှုအား စစ်ဆေးတွေ့ရှိပါက လက်နက်ဥပဒေဖြင့် အရေးယူ သွားမည်ဖြစ်
နှစ်နိုင်ငံအကြားရှိ ကျွန်းပေါ်မှ ဗုဒ္ဓဆင်းတုတော် ခိုးယူခံရမှုနှင့် စပ်လျဉ်း၍ တောင်ကိုရီးယား ၅ ဦးကို ဖမ်းဆီး
မြဝတီ ကုန်သွယ်ရေးဇုန် မြေကွက်များ အဆမတန်မြင့်တက် နေခြင်းကြောင့် ကုန်သိုလှောင် တင်သွင်းရန် နေရာအခက်အခဲများ ရှိနေ
၆ ပွင့်ဆိုင် တွေ့ဆုံပွဲအတွက် တိုင်းရင်းသား ကိုယ်စားလှယ်အဖြစ် ဒေါက်တာအေးမောင်ကို ရွေးချယ်
ရေအောက်မြို့တော် တည်ဆောက်ရန် ဂျပန်ကုမ္ပဏီ တစ်ခုစီစဉ်
ဝေဇယန္တာလမ်းမပေါ်တွင် ပြိုင်ကားနှင့် ဆိုင်ကယ်များ အပြိုင်အဆိုင် မောင်းနှင်
ISIS သည် ဒေသတွင်းသို့ အများဆုံး ခြိမ်းခြောက်လျက် ရှိသည့် ဂျီဟတ်ဒ် အဖွဲ့ဟု ဂျာမနီဝန်ကြီးချုပ် ပြောကြား
အလွတ်သဘောတွေ့ဆုံရန် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည် ဖိတ်ကြားချက် တပ်ဘက်က ငြင်းဆန်
November 26, 2014 at 5:03pm
ကျွန်တော် ငါးတန်းကျောင်းသားဘ၀အထိ ရန်ကင်းတောင်ခြေမှ မန္တလေးမြို့ထဲသို့၎င်း ။ မင်းမွေးတောင်ခြေမှကျောက်ဆည်မြို့ထဲသို့၎င်း-ဘတ်စ်ကားဖြင့်ကျောင်းတက်ခဲ့ရသောကြောင့် အဲဒီခေတ်က ခရီးသည်တင်ဘတ်စ်ကားတွေကို ကျွန်တော့်ဘ၀အကြောင်း တိုက်ဆိုင်လာတိုင်း အမှတ် တရဖြစ်နေခဲ့ပါသည်။
ဟောင်ကောင်သတင်းထောက်က ဒလိုင်းလားမားကိုမေးထားတဲ့ အမေး ၁ဝခု
ဟောင်ကောင်သတင်းထောက်က ဒလိုင်းလားမားကိုမေးထားတဲ့ အမေး ၁ဝခုလို့ ဖတ်ရပါတယ်။ တကယ်မေးထားလား မမေးထားလားဆိုတာမသိပေမယ့် အမေးအဖြေတွေကိုနှစ်သက်လို့ ဘာသာပြန်မျှဝေပါတယ်။
(၁) ဆုံးရှုံးသွားတဲ့အရာကို ပြန်ပေးပါလို့လိုက်တောင်းဖို့လိုသလား
တကယ့် ပေါက်ပေါက်ရှာရှာ ဆေးပညာ တွေ့ရှိချက် ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ် လည်း ရေဒီယိုဓာတ် ရောင်ခြည် အဆိပ်သင့်မှုကို အရက်က ကာကလည်း ကာကွယ်ပေးသလို ပျောက်လည်းပျောက်ကင်းစေတယ် လို့ အမေရိကန် ဆေးပညာရှင်များက ၂၀၀၈ ခုနှစ်က တွေ့ရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။
မော်စကို၊ နိုဝင်ဘာ ၂၅
ရုရှားသမ္မတ ဗလာဒီမာပူတင်က မဟာဗျူဟာမြောက် စစ်ဌာနချုပ် အသစ် တစ်ခုကို ဖွဲ့စည်းလိုက်ကြောင်း၊ အာတိတ်ဒေသစစ်ဆင်ရေးအားလုံး နှင့်အသစ်ဖြစ်ထွန်းမှုများကိုလည်း ခြုံငုံမိနိုင်ကြောင်း၊ ဤစစ်ဌာနချုပ်သည် ဒီဇင်ဘာ ၁ ရက်တွင် စတင်တာဝန်ထမ်းဆောင်သွားမည်ဖြစ်ကြောင်း ကရင်မလင် နန်းတော်၏ ကြေညာချက်၌ဖော်ပြခဲ့သည်ကို ဆင်ဟွာကရေး သားလိုက်သည်။
မြန်မာ နဲ့ စင်္ကာပူ ဘော်လုံးပွဲပြီးလို့ ကွင်းထဲက ပြန်ထွက်လာတော့ ကင်မရာကိုင်ထားတဲ့ သတင်းထောက်တစ်ယောက်က ကျနော့်ဆီ ပြေးလာပြီး ပြောတယ်... ...
"အား.. ဆောဒီးဘဲဒီး... သန်၎ကို သန်၎ကို ဟုတ်တယ်"
ရှောက်ရေနွေး သောက်ရခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူးများ (လူတိုင်းသောက်သင့်လို့ မျှဝေပေးတာပါ)
မနက်အိပ်ရာထခါစမှာ ရေနွေးမတ်ခွက်တစ်ခွက်ထဲကို ရှောက်သီးတစ်စိတ်ညှစ်ပြီး သောက်ပေးရင်
အောက်ပါအကျိုး ကျေးဇူးတွေ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
ရှောက်သီးမှာ ဗီတာမင် C နဲ့ ပိုတက်စီယမ်တွေ များစွာ ပါဝင်ပါတယ်။
အေသွေးပိုင်ရှင်များရဲ့ စိတ်နေစိတ်ထားကတော့ အောက်ပါအတိုင်းပါ..ငယ်စဉ်ဘ၀မှာတော့ သူတပါးကို စဉ်းစားပေးတယ်ဆိုတာ သိပ်မရှိခဲ့ဘဲ ကိုယ်အတွက်ကိုသာ စဉ်းစားတတ်ကြပါသတဲ့… သူတပါးကို နောက်ပြောင်ရတာကိုလဲ ကြိုက်နှစ်သက်ပါသတဲ့… ဒါပေမယ့် ကြီးပြင်းလာတာနဲ့ အမျှ ငယ်စဉ်က စရိုက်သဘာဝများက တဖြည်းဖြည်း ပြောက်ကွယ်သွားပြီး သူများတကာတွေ အံ့အားသင့်လောက်အောင် အေးဆေးတည်ငြိမ်တဲ့သူ ဖြစ်လာပါတယ်တဲ့…
‪#‎ရေခဲတိုက်‬ တစ်ခုတွင် ဖြစ်သည်.....
နာမည်ကြီးနိုင်ငံရေးသမား ၃ ဦး၏ အလောင်းများ မီဒီယာများကို ပြသရန် ရေခဲတိုက်တွင် ပြင်ဆင်ထားသည်။
အလောင်းအားလုံး၏ မျက်နှာကိုယ်စီတွင် အပြုံးတွေ ဆင်ယင်ထားသည်။ ရေခဲတိုက်မှူးက ရဲများကို ဖိတ်ကြားပြီး အဖြစ်အပျက်ကို လိုက်လံ ရှင်းလင်းပြသည်။
၁) သင်ဘောလုံးပွဲကြည့်နေလျှင် ဘီယာသည် စိတ်ရှည်စွာစောင့်ဆိုင်းပေးနေခြင်း
၂) သင့်ဘီယာကုန်သွားလျှင် လွှင့်ပစ်ပြီး ၊နောက်ထပ်အသစ်တစ်လုံးရှာသောက်နိုင်ခြင်း
၃) ဘီယာ ဆိုတာ ဘယ်တော့မှ နောက်မကျတတ်ခြင်း၊ မှန်ခြင်း
၄) အသစ်တစ်လုံးမှာလျှင် သင်သောက်နေသော အဟောင်းမှ မနာလိုဝန်တိုမှုမရှိခြင်း
၅) လက်ပြောင်းလက်လွဲ ပြောင်းသောက်နိုင်ခြင်း
၆) သင်သည်ဘီယာအရောင်းဆိုင်သို့သွားသည့်အချိန်တိုင်း ၊ ဘီယာသောက်နိုင်ခြင်း
၇) ဘီယာကြောင့် ခေါင်းကိုက်မှုအလျဉ်းမရှိခြင်း
၈) ကုန်သွားသည့်ဘီယာပုလင်းခွံသည်ပင် တန်ကြေးရှိခြင်း
၉) ဘီယာဆိုတာ အမြဲတမ်းလွယ်ကူစွာစီးဆင်းနိုင်ခြင်း
၁၀) မိတ်ဆွေများနှင့် ခွဲဝေသောက်သုံးနိုင်ခြင်း